Nubia Red Magic 6 na Red Magic 6 Pro Tencent: atụmatụ na ọnụahịa | Gam akporosis
Mwepụta nke Nubia Red Magic 6 Ọ na-akwadebe ya ruo ọtụtụ izu na ọ na-ama na-abịa, dị ka ọ bụ emeputa onwe ya na mbụ mara ọkwa ya site na ukara posta. Eziokwu ahụ bụ na ekwentị ahụ bụ nke gọọmentị, yabụ na anyị amatala ihe niile gbasara ya, mana, na mgbakwunye, enwere ụdị dị elu karịa nke a tọhapụrụ, ọ bụkwa Red Ime Anwansi 6 Pro Tencent.
Ma ngwaọrụ ndị dị elu na-elekwasị anya na ọha na eze na-egwu egwu, n'ihi ya, ha nwere atụmatụ ọrụ na-adọrọ mmasị na ọrụ ndị na-agụnye ihuenyo nwere ọnụego ume ọhụrụ nke 165 Hz, na-eme ndị a ekwentị izizi iji buru otu na ọnụego ume ọhụrụ ahụ.
1 Ihe niile banyere ihe anwansi ohuru Red Magic 6 na Red Magic 6 Pro Tencent
Ihe niile banyere ihe anwansi ohuru Red Magic 6 na Red Magic 6 Pro Tencent
Ma Red Ime Anwansi 6 na Red Magic 6 Pro Tencent nwere Igwe ihe ngosi 6.8 nke anụ ọhịa na AMOLED. Mkpebi nke ndị a bụ FullHD + nke 2.400 x 1.080 pikselụ, ebe ume ọhụrụ bụ 144 Hz, mbụ echiche na mobiles. Ka anyị buru n'uche na, ruo ugbu a, nke kachasị elu bụ 144 Hz, ọ dịkwa naanị na igwegharị ole ma ole.
Ihe ọzọ bụ na ogwe nwere ọnụ ọgụgụ ntinye aka nke 500 Hz, kasị elu nakwa na mobiles, ya mere nzaghachi ọnụego nke ihuenyo bụ ihe ozugbo, ihe ezigbo uru maka gamers.
Chipset Qualcomm Snapdragon 888 na-enye ike ha abụọ, nke a jikọtara ya na 5/8 GB LPDDR12 RAM na nke mbụ yana 12/16 GB na nke abụọ. Nhọrọ oghere dị n'ime bụ otu maka ikpe abụọ ahụ: 3.1/128 GB UFS 256.
Batrị Red Magic 6 nwere ikike nke 5.050 mAh ma dakọtara na teknụzụ na-ebu ọkụ ngwa ngwa 66 W. Batrị Red Magic 6 Pro Tencent bụ 4.500 mAh, mana ụgwọ ngwa ngwa nke a bụ 120 W. A na-ebo ha abụọ ebubo site na ọdụ ụgbọ USB-C.
Usoro igwefoto dị okpukpu atọ yana otu maka ụdị ọ bụla, nke a na-eduzi ihe mmetụta 64 MP isi, nke na-esonyere ya na 8 MP ultra wide angle lens na 2 MP macro shooter. Igwefoto onwe onye bụ 8 MP.
Ihe ndi ozo di iche iche gunyere njiko 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, 2x2 MIMO, Wi-Fi abuo abuo, ihe nchoputa mkpisi aka na onodu ogugu 3.5mm Sistemụ nrụọrụ ha ji abịa bụ A gam akporo 11 n'okpuru RedMagic OS 4.0.
NUBIA AKA MAGHARA 6
NUBIA AGBAGHARA Anwansi 6 PRO
IKIRU 6.8-anụ ọhịa FullHD + AMOLED na 2.400 x 1.080 pikselụ / 165 W ume ume ọnụego / 500 Hz aka nzaghachi 6.8-anụ ọhịa FullHD + AMOLED na 2.400 x 1.080 pikselụ / 165 W ume ume ọnụego / 500 Hz aka nzaghachi
Nhazi Snapdragon 888 Snapdragon 888
Ohere TERLỌ N'IME 128/256GB UFS 3.1 128/256GB UFS 3.1
GHARA CAMERAS 64MP Isi + 8MP Ultra Wide + 2MP Macro 64MP Isi + 8MP Ultra Wide + 2MP Macro
CAMERA N'IHU 8 MP 8 MP
UMUAKA 5.050 mAh na 66 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa 4.500 mAh na 120 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa
OS Gam akporo 11 na RedMagic OS 4.0 Gam akporo 11 na RedMagic OS 4.0
Njikọ Wi-Fi 802 ac dual band / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1 / GPS / 4G LTE / 5G Wi-Fi 802 ac dual band / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1 / GPS / 4G LTE / 5G
Atụmatụ ndị ọzọ On ihuenyo akara mkpisiaka agụ / Face ude / USB-C On ihuenyo akara mkpisiaka agụ / Face ude / USB-C
Ogologo oge X x 169 77.09 9.7 mm X x 169 77.09 9.6 mm
Emeela ka ekwentị ndị a rụọ ọrụ na China, n'ihi ya, ha ga-adị maka ire ere na mbụ, mana ọ bụghị maka obere izu ole na ole, ikekwe. E nwere ụdị atọ dị iche iche, bụ Red Magic 6 Pro Transparent Edition nke kachasị dị elu maka ịnwe ụdị RAM na ROM nke 12 + 512 GB, ọ bụ ezie na o nwere otu ụdị nke ụdị Pro Tencent. Ọnụahịa ha kwupụtara ọkwa dị ka ndị a:
Red Ime Anwansi 6
8 GB + 128 GB: 3.799 yuan (ihe dị ka euro 488 na mgbanwe ahụ)
12 GB + 128 GB: 4.099 yuan (ihe dị ka euro 526,5 na mgbanwe ahụ)
12 GB + 256 GB: 4.399 yuan (ihe dị ka euro 565 na mgbanwe ahụ)
Red Ime Anwansi 6 Pro Tencent Edition
12 GB + 128 GB: 4.399 yuan (ihe dị ka euro 565 na mgbanwe ahụ)
12 GB + 256 GB: 4.799 yuan (ihe dị ka euro 613 na mgbanwe ahụ)
16 GB + 256 GB: 5.299 yuan (ihe dị ka euro 681 na mgbanwe ahụ)
Red Ime Anwansi 6 Pro Pipe Edition
16 GB + 256 GB: 5.599 yuan (ihe dị ka euro 719 na mgbanwe ahụ)
18 GB + 512 GB: 6.599 yuan (ihe dị ka euro 848 na mgbanwe ahụ)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nubia Red Magic 6 na Red Magic 6 Pro Tencent: ekwentị ndị mbụ nwere 165 Hz screens